UKIM KARDASHIAN UTHI UKYAN WAYESAZI UKUBA UFUNA ISIPHAKAMISO SEKHAMERA - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato UKim Kardashian: U-Kanye West ebesazi ukuba ndingathanda ukuba ne-Engagement yam kwiKhamera
Kwindibano yodliwanondlebe engabanjwanga, uKim Kardashian uthi uyazi ukuba uKhan West uceba isindululo ezantsi kwiikhamera. (Shutterstock.com)
Ngu: Esther Lee 08/16/2017 ngo-4: 30 PM
Ngelixa esenza imephu kwisindululo sakhe esinzulu sango-2013 sokuba UKim Kardashian rapper Kanye West ithathele ingqalelo into ebalulekileyo kwinkosikazi yakhe yexesha elizayo: ukuba neekhamera zemveliso kwindawo yokubhala umzuzu wabucala.
Kudliwanondlebe olungenathintelo kunye Intatheli yaseHollywood , Intsapho yenyani edumileyo yavula malunga namanye amabali obuntu kwimbali yeminyaka eli-10 Ukugcina kunye neeKardashians , kubandakanya umtshato ophakamileyo kaKim eNtshona. Kulukhuni ukuba ungabhekiseli ubuncinane [kubudlelwane bakho], utshilo uKim. U-Kanye wayefana, 'Andiyonxalenye yomboniso. Ayisiyiyo le ndiyenzayo. Ndinomsebenzi wam nobomi bam. ’Uya kukumangalisa ngokwenene nangona. Uya kuba ngathi, 'Andifaki bhanyabhanya' kwaye emva koko kuboniswe ngokungakhethiyo. Kodwa ndiza kuyifumana [imifanekiso] ndimbonise.
Ngaphandle kokungathethi kweNtshona malunga nokuvela kumdlalo, wayefuna ukubhala uxwebhu olunye lobomi. Ngo-Okthobha u-2013, u-rapper wacebisa u-Kardashian e-AT & T Park e-San Francisco, egcwaliswe nge-okhestra ye-symphony, i-pyrotechnics, kunye nomyalezo we-Jumbotron ofundwayo, uPleeease utshate meee !!!
Iposi ekwabelwana ngalo nguKim Kardashian West (@kimkardashian) ngo-Okthobha 22, 2013 ngo-8: 41 am PDT
Inkwenkwezi yokwenyani yangeniswa kwisithuba ngelixa ivaliwe, kwaye amalungu osapho kunye nabahlobo bayo babukele isindululo sivela kwiindawo zokuma. Umzuzwana kamva wasasazwa KUWTK . Wayesazi ukuba ndingathanda ukuba nenxaxheba yam kwikhamera ke wayifota wathi, 'Inkangeleko inokwahluka kancinci kuba ndiyazidinga ezi ntlobo zeekhamera,' kwaye ndafumana umculo ocacileyo, uKim uxelele THR . Kodwa andiyi kuphinda ndithethe ngento eqhubekayo noKhanne. Ndiza kuthetha ngendlela endiziva ngayo. Uyazi ukuba ndiyamkhusela ngokwenene.
Ewe! Umongameli u-Adam Stotsky wongeze, u-Kanye ubenobabalo ngokwaneleyo ukuba abe kumdlalo kancinci. Ukuba wayenalo ibali awayefuna ukulibalisa ngokusebenzisa iilensi zika-E!
U-Kanye akanalo ixesha okanye awunawo umnqweno endiwaziyo ngokwenza umboniso onje, uKris Jenner wongezwe kudliwanondlebe olufanayo.
UKim naye wachukumisa umtshato wakhe omnandi waseFlorentine ngo-2014. Sasingenanjongo zokubonisa umtshato wethu kumdlalo. Wadutyulwa nge-iPhones kuphela kunye nomncedisi wam kwikhamera yesandla, ubanga njalo. Yena [uStep Shep] wayeme ngenene phezu kwenqaba kwaye eqhaqhazelisa amazinyo, kuba sasisazi ukuba sifuna ukuthatha olu hambo luhle ukusuka phezulu. Abantu babemngxolisa ngokungathi, ‘Awungekhe ubukele phezulu phaya phezulu!’ Kodwa ke siyithande kakhulu le vidiyo, [sayisebenzisa kwenye inkqubo].
Ewe, uShep wakhumbula amava ngoMeyi ukuya Ukucokisa 29 . Khange ndifike nokuba ndibukele umsitho kuba bendikwenza umboniso bhanyabhanya, uShep, ngoku ongu-COO waseKardashian West Brands, utshilo. Ndihlala ndisiba ngumdlali weqonga amaxesha abonisa umboniso, xa bengafuni iikhamera ezipheleleyo-ngenxa yoko bendifota wonke umntu elungiselela… bendikwi-Adidas sweatpants kunye neT-shirt kwaye khange ndihlambe ngaloo mini ! Ndaye ndahamba ke naye ndaya ezantsi kwisinyusi ukuze akwazi ukuhamba ezantsi kwelitye lide, emva koko ndabaleka ndabuya umva ndaqala ukumthwebula ngophahla! Yayiyimali eyadutyulwa ngomboniso. Ngeli xesha, bekukho umntu othile wezokhuseleko endikhwaza, 'Awunakho ukwenza ifilimu apha!'
indlela yokubopha iqhina eliqhelekileyo
Ngeli xesha, omnye umtshato waseKardashian unokubonakaliswa kwixesha elizayo. Ukuqala kwethu, ndandiqhula ndathi, 'Siza kuba kwisizini ye-32, uKylie uyatshata,' utshilo uKris THR . Ndandihlekisa, kwaye silapha, kwaye lixesha le-14, ke lumka ukuba unqwenela ntoni.
Ukusebenza ixesha elide KUWTK umvelisi olawulayo URyan Seacrest bangene kubomi obude beenqaku lokwenyani. Olu sapho luye lwadlula kwizinto ebomini babo ezazise ukuqonda kunye nokwamkelwa kwabantu, uqukumbele watsho. Yonke into isuka kubudlelwane bobuhlanga ukuya kumlutha wotshintsho lukaBruce-to-Caitlyn. Kuza kuhlala kukho ibali; njengoko bezimisele ukuyenza, umboniso ungaqhubeka.
iimpahla ezimnyama nezimhlophe ezisesikweni
yimalini oyichitha kwisipho somtshato
imitya yomtshato yamakhonkco amile okwepere
ixabisa malini umtshato?
iikhabhathi ezimnyama ezi-rustic
indawo yomlilo kwigumbi lokulala